इटहरीमा हर्न निषेधित अब्यवहारीक, सहज हुनुको सट्टा सास्ती धेरै - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भाद्र ०६, २०७४ समय: १९:१५:४०
इटहरी / सडक सहज रुपमा गन्तव्य सम्म पुग्न सकियोस भनेर निर्माण गरिएको हुन्छ । सडकलाई व्यवस्थित वनाउन सडक नियमहरु पनि वनाइन्छ । सडक प्रयोगकर्ता र सडकको सुरक्षाका लागि निति नियमहरु वनाउने गरिन्छ तर कहिले कहिँको नियम सुरक्षाका लागि भन्दा पनि देखासिकीका रुपमा वनाउने गरिएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा लागु गरिएको हर्न निषेधित नियम पुर्वको व्यस्त सहर इटहरी बजार क्षेत्रमा समेत लगाइएको छ । तर इटहरीमा लगाइएको हर्न निषेधित नियम सडक प्रयोगकर्ताहरुको लागि सहज हुनुको सट्टा सास्ती दिए जस्तो भएको छ ।
पुर्व पश्चिम राजमार्ग र कोशी राजमार्ग दुवै जोडिने इटहरी क्षेत्रको सडकको अवस्था तथा सडक प्रयोगको अवस्थालाई हेर्दा हर्न निषेधित बनाउन उपयुक्त देखिदैन तर घोषणा गरिएको छ । हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा भएको जानकारी पाउनेहरु समेत वाध्यताले हर्न बजाएर नियमलाई चुनौति दिइ रहेका छन भने थाहा नपाउनेहरुले त पहिलेको अवस्था सम्झेर हर्न बजाई रहेका देखिन्छन ।
इटहरी क्षेत्रको व्यस्त सडक जहाँ हर्न बजाउन नपाइने नियम वनाइएको छ । त्यस क्षेत्रको सडक भत्कीएर खाल्डाखुल्डी परेका कारण आफनो साइड छोडेर अर्काेको साइडबाट सवारी चलाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ त्यस्तो अवस्थामा हर्न बजाउनु पर्ने अवस्था आउछ कि आउदैन ? सडक पेटी अतिक्रमण भएका छन पैदल यात्रीहरु पनि सडकमै हिड्न वाध्य देखिन्छन यस्तो अवस्थामा हर्न बजाउनु पर्छ कि पदैन ? सडकमा छाडा चौपायाहरु जथाभावी रुपमा हिडी रहेका हुन्छन यस्तो अवस्थामा हर्न बजाउनु पर्छ कि रोकेर सडक जाम गर्ने ? सवारी साधनहरु जथाभावी रुपमा सडकनै घुमाउने गरिएको देखिन्छ ।
पैदल यात्रीहरु जथाभावी रुपमा बाटो काटी रहेका हुन्छन । सार्वजकि सवारी साधनहरु निश्चित स्थानमा नरोकी जथाभावी रुपमा रोक्ने क्रम अझै रोकीएको छैन । प्रयाप्त जेब्राक्रस बनाइएका छैन । साइकलका लागि छुट्टै साइकल लेनको व्यवस्था गरिएका छैनन साइकल प्रयोगकर्ताको संख्या र प्रयोगशैलीका विषयमा जानकारी नलिई हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो कि हैन ? साँझ र विहानको समयमा साइकल यात्रीको चाप कस्तो हुन्छ त्यस तर्फ विचार पुर्याइएको छ कि छैन ? यस्ता सवालहरुको जवाफ घोषणा गर्ने निकायहरुसंग छ कि छैन ?
घोषणा गरिएपछि केही ठाउँमा हर्न निषेधित क्षेत्र लेखिएका बोर्ड राख्ने बाहेक सडक प्रयोगकर्ताहरुमा हर्न निषेधित क्षेत्रका विषयमा सचेतना पुगेको छ कि छैन ? यि सवै कुराहरुलाई मनन गरी इटहरी क्षेत्रमा घोषणा गरिएको हर्न निषेधित क्षेत्रको पुन विचार गरी हर्न निषेधित क्षेत्र वनाउन चुस्तदुरुस्त संरचना बनाउने देखि जनचेतना अभिवृद्धि गरेर मात्र पुनः हर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने हो कि ?